Article submitted by: minkyaw thuyein on 31-Oct-2012
ဘင်္ဂါလီ မွတ်စလင် နဲ. မြန်မာ ဗုဒ္ဒဘာသာ အရေး ơ
ရခိုင် ပြည်နယ်က အဖြစ်တွေအကြောင်း ကြားရတာ ရုတ်တရက်တော့ စိတ်မချမ်းမြေ.စရာဘဲ ။ ဒါဟာ ဒို.အရေး တခု သက်သက် ။ ပြောစရာ ရှိရင် ပြောရမှာဘဲ နှုတ် ပိတ်ရေငုံနေလို. မဖြစ်ဘူး ၊ ကိုယ့်အမေ ကိုယ့်နှမ
တွေ ပါသွားလိမ့်မယ် ။ ရခိုင်တွေ ၊ မာရမာကြီး မျိုးတွေအပါအ၀င် လူမျိုး
စု ၇ စုတို. နေနှိူင်ခဲ့ ကြလွန်းလို.လဲ အခုလောက်ထိ မွတ်စလင်တွေ အတင့်ရဲလာတယ် ၊၊
ကမ္ဘာ.သမိုင်းကို လေ့လာရင် ခရစ်ယန်တွေ ၊ ဂျူးတွေက သူတို.ကို ဘယ်သူတွေက ဘယ်လို ညှင်းပန်း နှိပ်စက် မတရား ပြုပါ တယ်လို. အော်ဟစ်ခဲ့ကြတယ် ဆိုတာတွေ.ရတယ် ၊ ဒီကမ္ဘာ.သမိုင်းကိုဘဲ လေ့လာရင် ခရစ်ယန်တွေ ဂျူးတွေက အခုထိ ဘယ်သူတွေကို ဘယ်ပုံ ဘယ်နည်းနဲ့ ညှင်းပန်း နှိပ်စက် မတရား ပြုခဲ့သလဲ ၊ နှိပ်စက်နေတုန်း
ဘဲလဲ ဆိုတာကိုလဲ ထင်ထင်ရှားရှား တွေ.ရမယ် ၊
အခုဆိုရင်လဲ ဒို.မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖြစ်နေတာက (မနိုင်ရင် ကုန်းကိုက်) ဆိုတဲ့ စကားလို ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့ ဘင်္ဂါလီ မွတ်စလင်တွေ ၊ ကချင် ခရစ်ယန်တွေက ဒို.မြန်မာ ဗုဒ္ဒဘာသာကို ကုန်းကိုက်နေကြပြီ ၊ ခွေး ရူးးရောဂါ မရအောင် ဒို.ကိုယ်ဒို.ကာကွယ်ရမယ် ဖြစ်တယ် ၊
ရိုဟင်ဂျာ ဆိုတဲ့ မွတ်စလင်တွေဟာ ဒို.မြန်မာနိုင်ငံ ရဲ့ မတည်ငြိမ်မှုတွေ မညီညွတ်မှူတွေကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး ရခိုင် ပြည်နယ် ထဲကို ပြည်ပ
အားကိုး အထောက်အပံ့တွေ၊ အကြောင်းအမျိုးမျိုး နည်းအဖုံဖုံနဲ.၀င်လာ
်ပြီး အိမ်ရှင်မျက်နှာမှ မထောက် ဒေသခံ ရခိုင် မြန်မာဗုဒ္ဒဘာသာဝင်တွေ
အပေါ် အမျိုးမျိုး ကျေးဇူးကန်း စော်ကား ယုတ်မာနေတာတွေဟာ ကါလ
အတန်ကြာရှိနေခဲ့ပြီ ဖြစ်တယ် ဆိုတာ အများ အသိဘဲ ၊
မတည်ငြိမ်ဘူးပြောရပေမဲ့ ဘာသာစုံ လွတ်လွတ်လပ်လပ်ကြီး ကိုးကွယ်နေကြတဲ့ ဒို.နိုင်ငံမှာ အင်္ဂလိပ်ခေတ်က ဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ ကုလား ဗမာ အရေးအခင်း ဆိုတဲ့ မွတ်စလင် နဲ့ ဗမာရိ်ုက်ပွဲဟာ ဆွမ်းခံကြွနေတဲ့ ဗုဒ္ဒဘာသာ ဘုန်းတော်ကြီးတပါးကို မွတ်စလင်တယောက် က ဒါးနဲခုတ်
လို. လို.မှတ်တမ်းတွေက ဆိုတယ် ၊ ၁၉၆၇ ခု မှာ တရုတ် မြန်မာအရေး
အခင်း ဆိုတာတွေခဲ့ဘူးတယ် ၊ လူတွေအနေနဲ. ကတော့ လို လိုသလို မလို မလိုသလိုပြောကြတာဘဲ ၊
ဒီရိုဟင်၈ျာ ပြသနာဟာ မီးတောင်ကြီးလို တအုံနွေးနွေး ဖြစ်နေခဲ့တာ ကြာလှ ပါပြီ ၊ အခု မတတ်သာတဲ့အဆုံး ပေါက်ကွဲတာဘဲ ။ သူများ နိုင်ငံတွေက မီးတောင်အမျိုးမျိုး အဆင့်အမျိုးမျိုးနဲပေါက်ကွဲ တာတွေ မြင်ရ တွေ.ရတာ ကြောက်စရာ လန်.စရာဘဲ ၊ နာမယ်အကြီး ဆုံးက
တော့ အေဒီ ၇၉ ခုက အီတလီနိုင်ငံမှာ ပေါက်ကွဲခဲ့တဲ့ ဗေစူဗီယတ်(စ) မီးတောင်ဘဲ ၊ တောင်ခြေက ပေါင်ပေ မြို. နဲ.မြို.နေ လူတွေ ချော်ရည်နဲ.ပြာပူတွေ အောက်မှာ မြူတ်ခဲ့ရတယ် တဲ့ ။ ဒါက ဗဟုသုတ အဖြစ်ပြောတာပါ ။
အဲဒါဘဲကြည့်ကြတော့ ၊ ကြည့်ကြတော့ဆို ဘာကိုကြည့်ရမှာလဲ မြင်ရောမြင်ကြရဲ့လား ၊ ရိုဟင်ဂျာ ဆိုတဲ့ ခေါ်တောကုလားတွေ ဒို့ကို နှောက်ယှက် ပြသနာ ဖေါ်နေတာကို ပြောနေတာ ။ မြန်မာမှန်ရင် မြန်မာ့သမိုင်း သိသင့်တာပေါ့ ၊ ကိုယ့်နိုင်ငံ ကိုယ့်လူမျိုးအရေးဟာ ကိုယ်အရေးဘဲ မဟုတ်ဘူးလား ။
ဒို.တိုင်း ဒို.ပြည် ဒို.တတွေ နိုင်ငံကြီး တခုတည်ထောင်ဘို.ကြိုးပန်းမှူတွေ
ဟာ လူမျိုးရေး ဘာသာရေး တွေကြောင့် အခက်အခဲကြုံ နေရတယ် ဆိုတာကို သမိုင်းက အထင်အရှားပြနေတယ် ။ မြန်မာတိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေက ရှေ.အမြင် အမြော်အမြင် ကြီးစွာနဲ. ဒို.တတွေ အားလုံး တသွေးတည်း တသားထဲ ညီညီညွတ်ညွတ် နေနိုင်ကြဘို စီစဉ် ခဲ့တာတွေကို နောက်လူငယ်တွေက အဓိပ္ပါယ် အမျိုးမျိုးကောက် ၊ အမျိုးမျိုးဖေါ်ပြီး ညီညွတ်ဘို.ကို ဖျက်ဆီးခဲ့ကြတယ် ၊ ဘယ်လိုမှ ပြင်လို.ကို မပြီးနိုင်ဘူး ။ မဆိုင်တဲ့ ဘေးလူတွေကလဲဝင်ရှုတ် မြှောက်ပေးနေတာ
ဗိသုကာဆရာကြီးတွေဘဲ ၊ ဆောက်လုပ်ရေးသမားတွေက ဒို.တတွေ
ဘဲဖြစ်တယ် ၊ ဒို.တာဝန် ဒို.ကျေပြွန်ခဲ့ကြခြင်း မရှိလို. ဒို.တတွေ ယောင်ဝါးဝါး လုပ်ခဲ့ကြလို. ကိုယ်ကိုယ်တိုင် တည်ထွင် ဖန်တည်း စီစဉ်ကြခြင်းမရှိ သူတပါးနဲ့ သဘာဝဓမ္မ ကိုဘဲ အားကိုးလွန်းလို. ဖြစ်ရတယ်လို.ဘဲ ဆိုခြင်
မှတ်မိဘို.ကောင်းတာက ၁၈၆၆ ခု မြင်ကွန်း မြင်ခုံတိုင် အရေးတော်ပုံ ဆိုတဲ့ အရေးအခင်းဟာ ၊ သားမက်နဲ့ယောက္ခမ ကြား ပဋိပက္ခ လို.ဆိုဆို ဒါမှမဟုတ် အဖေနဲ.သားကြား ပဋိပက္ခလို.ဘဲပြောပြော မအောင်မြင်တဲ့ အာဏာသိမ်းရန် ကြံစည်မှုမှာလူအတော်များများ သေခဲ့ရတယ် ၊ အဲဒီတုန်းက ကုလားကာ နောက်ကွယ်က အင်္ဂလိပ်လိုလို ပြင်သစ်လိုလို တို.ရှိပေမဲ့ မြန်မာတွေ စည်းလုံးမှုမရှိ ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှူမရှိ မယေမယျာ ယောင်ဝါးဝါးမို. အခွင်းကောင်းယူပြီ အမြဲ ပြင်ဆင်ထားတဲ့ အင်္ဂလိပ်ကဘဲ နောက်ဆုံး အနိုင်ယူ သွားတော့တယ် မဟုတ်လား ။
၁၈၂၄ ခု အင်္ဂလိပ် မြန်မာ ပဌမ စစ်ပွဲ ဟာ ရှင်မဖြူကျွန်း ကိုအကြောင်းပြပြီး အင်္ဂလိပ် ကျောထောက်နောက်ခံ ပံ့ပိုးမှု ရတဲ့ ခြစ်တကောင်း ကုလား ဘင်္ဂါလီတွေ ကျူးကျော်ဝင်ရောက် လို.ဖြစ်ရတဲ့ စစ်ပွဲ ဘဲ ။ အဲဒီနောက် မြန်မာတနိုင်ငံလုံးကိုပါ အင်္ဂလိပ်သိမ်းတော့ အင်္ဂလိပ် တိုရဲ.ကောင်းချီး သြဘာ မင်္ဂလာနဲ. ကုလားမျိုးစုံ တရု့တ်မျိုးစုံ ဒို.နိုင်ငံကိုရောက်လာတယ် ။ ဒို.ဘာမှ မလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူး ၊ ဒို.လူမျိုးနဲ့ ဒို.နိုင်ငံတောင် ပျောက်လုဆဲဆဲ ဖြစ်ခဲ့ရတယ် ၊ မနဲထိမ်းခဲ့ရတယ် ။
အင်္ဂလိပ်လက်အောက်က လွတ်မြောက်ရေး တိုက်ပွဲမှာလဲ ဒို.ခေါင်းဆောင်တချို. လူပေါင်းမှားလို.၊ အတွက်အချက်မှားလို. ဒို.တတွေ ပါးရိုက် ခံရတဲ့ ဘ၀ ရောက်ခရဲ့ဘူးတယ် ။ အဲ ဒီ အတွေ.အကြုံတွေ သင်္ခဏ်းစာတွေနဲ.ဘဲ ဒို.တဒွေဟာ ဆရာတပါး ဖြစ်ထိုက်နေပြီ ။ ဒါပေမဲ့ ဒို.တတွေဟာ အခုချိန်ထိ သူတပါးရဲ. နောက်လိုက် နောက်သား ဘ၀မှာဘဲရှိတုန်း ဆိုတော့ အတော်ကို ၀မ်းနဲစရာ ကျေကွဲ စရာ အဖြစ် ဘဲလို.မှတ်ယူရမယ် ၊ ဘယ်သူမပြု မိမိမှု ဆိုတာလို ဘဲ ပေါ့နော် ။
ဒို.မြန်ပြည်က ဌာနေတိုင်းရင်းသား အားလုံးအပေါ်မှာတော့ သွေးရောမျိုးမစစ် ကပြား မျိုးစုံကဗိုလ်ကျ ချယ်လှယ် နေခဲ့ကြတာမှာ ကုလား ကပြား တရုတ်ကပြား အင်္ဂလိပ်ကပြား ဆိုတာတွေဘဲ ဗမာဆိုရင် အရုပ်ဆွဲပြရလိမ့်မယ် ။ မြန်မာနိုင်ငံအရပ်ရပ်မှာ ကိုယ့်ဘေးလူကို ကြည့်လိုက်ရင် ကုလား ဒါမှမဟုတ် တရုတ်ကပြားဘဲ ။ အင်္ဂလိပ် ကပြားတွေ ကတော့ ကုန်လောက်ပါပြီ အဝေးနိုင်ငံတွေသွားကုန်ကြတယ် ။ အင်္ဂလန် ၊ သြစတေလျှား ၊ ကနေဒါ စသဖြင့် တို.ဆီ သွာားကြတယ် ၊ ကုလားနဲ.တရုတ်တွေ ကိုတော့လူကြိုက်နဲတယ်ဘဲပြောရမလား မသိ ၊
ငွေကြေးတတ်နိင်ရင် အမေရိကန်ကို သွားကြပြီး အဟောင်ကောင်
ထိုင်ဝမ်း အိနြိယား ကို အများဆုံးရောက်ကုန်တာရှိတယ် ။ ဒီကပြားတွေ
ဟာလဲ မြန်မာ နိုင်ငံသားတွေ ဖြစ်ကုန်ြပီး မြန်မာတွေနဲ.မခြားတော့
ဘူး ။ ပြောရမယ်ဆိုရင် ဒို.ခေါင်းဆောင် တချို.ဟာတောင် ကပြားတမျိုး
မျိုး ဖြစ်နိုင်တယ် ၊
အခု ဘင်္ဂါလီ တွေကတော. အဲဒီလိုမဟုတ် မြန်မာစကား ၊ တိုင်းရင်းသား စကား တမျိူးမျိုးကိုတောင် နားမလယ် တဲ့ ခေါ်တော ကုလား ဘင်္ဂါလီ သက်သက်တွေ တဲ့ မွတ်စလင်တွေကတော့ ဂျူးတွေလိုဘဲ ဘာသာရေး အစွဲနဲ.သူတို့မှသူတို့ လူမှတ်တယ် ၊ တခြား လူတွေထိမ်းသိမ်းသမျှ စည်း
ကမ်း လူကျင့်ဝတ်တွေကို တုန့်ပြန် လေးစားဘို.မပြောနဲ. ဖေါက်ဖျက်
တယ် ရန်လုပ်တယ် ။ သူတိုဘာသာ ထုံးစံဓလေ့တွေကို သူတပါးအပေါ် အတင်းအဓမ္မ သွတ်သွင်းတယ် ၊ မွတ်စလင်တွေဟာ တကမ္ဘာလုံးကို ရန်လုပ်နေတယ်။
ဘဂါင်္လီကိစ္စ ဆက်မယ်ဆိုရင် ၁၉၄၇ ခုနှစ်က လွတ်လပ်ရေးရခဲ့တဲ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံရဲ တစိပ်တဒေသဖြစ်ခဲ့တဲ့ အရှေ.ပါကစ္စတန်ဟာ သဘာဝဘေးဒဏ်တွေ ကြောင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှူ ငတ်မွတ် ခေါင်းပါးမှူ ၊ အစစအရာရာ တည်ငြိမ်မှုမရတဲ့အတွက်၊ စစ် ဖက်က အာဏာသိမ်း မှုတွေလဲ မကြာခဏ ကြုံရတဲ့ နိုင်ငံဖြစ်တယ် ။ ၁၉၇၁ မှာခု အိန္ဒြိယ အကူအညီ နဲ့ စစ်ပွဲ ဆင်နွှဲ ပြီး လွတ်လပ်ရေးကြေငြာခဲ့ တဲ့ အချုပ်အခြာ အာဏာပိုင်နိုင်ငံတခုဖြစ်တယ် ။
၁၉၇၁ စစ်ပွဲအတွင်း စစ်ပြေး ဒုက္ခသယ် ဘင်္ဂါလီ လူမျိုး မွတ်စလင်ဘာသာဝင်တွေဟာ နယ်ခြားဖြတ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံထဲ ၀င်ရောက် ဒုက္ခ သယ်အဖြစ် ခိုလှုံနေခဲ့ကြတယ် ၊ မြန်မာနိုင်ငံကလဲ ၊ လူ လူချင်းဆာနာထောက်ထား
ခြင်း၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဖွဲ.ကြီး ၊ နိုင်ငံတကာ စံနှုန်းတွေနဲ.လက်ခံ
ထားခဲ့တယ် ၊ ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ် ၊ မချိန် တန်ပြန်ကြ လိမ့်မယ်လို.လဲ တထစ်ချယုံကြည်ထား ခဲ့တယ် ၊
၁၉၈၂ ခု အောက်တိုဘာလ လယ်လောက်မှာ မြန်မာနိုင်ငံသားဥပဒေ ကို ပြဌာန်းအတည်ပြုခဲ့တယ် ၊ ပြည်သူတရပ်လုံးဟာ နိုင်ငံ သား လျှောက်ကြရတယ် ၊ ဥပဒေနဲ.ညီညွတ် အကြုံးဝင်ဝင်သူတွေကို နိုင်ငံသားအဖြစ် လက်မှတ် ထုတ်ပေးခဲ့တယ် ၊ ဒီဥပဒေ မတိုင် ခင်က မြန်မာနိုင်ငံမှာ အစိုးရနဲ. ဥပဒေလက်လှမ်းမီရာမှာ နေထိုင်ကြတဲ့ မြန်မာ့မြေပေါ်နေသူအားလုံးဟာ အမျိုးသား မှတ်ပုံတင် လက်မှတ် ကိုင်ဆောင်ရတယ် ၊ ဘယ်သူ ဘယ်ဝါဖြစ်တယ်ဆိုတာသိဘို.နဲ.နိုင်ငံမှာ သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ချိန်က လူဦးရေ ဘယ်ရွေ.ဘယ်မျှ ရှိတယ်ဆိုတာ သိဘို. ၊ နိုင်ငံတော်ရဲ့ စီမံကိန်းအရပ်ရပ် မှာ အထောက်အကူ ဖြစ် ဘို.ဘဲ ၊၊
အထူး သိထားရမှာက အမျိုးသား မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ကိုင်ဆောင်ရုံနဲ.မိမိဟာ အမှန်စင်စစ် ထိုနိုင်ငံသားဖြစ်သည်ဟု အလျှဉ်းမှတ် ယူခြင်း မရှိစေရ လို အမျိုးသား မှတ်ပုံတင်ဥပဒေက ဆိုထားတယ် ၊ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ပေါ်မှာလဲ အတိအလင်း ဖေါ်ပြထားတဲ့ အချက်ဘဲ ။ ဒီ အမျိုးသား မှတ်ပုံတင် လက်မှတ်ကို တရားမ၀င်နည်းနဲ.ရထားသည့်တိုင် နိုင်ငံသား မဖြစ်နိုင်ဘူး ။
၁၉၉၁ ခုနှစ်က ဘင်္ဂါလီ နိုင်ငံမှာ ဒီမိုကရေစီစံနစ်ပြန်လည်သွတ်သွင်း
ခဲ့ပေမဲ. စစ်ပြေး ဘင်္ဂလီ ဒုက္ခသယ် တွေ ၊ အဆက်ဆက်က နယ်ခြား ကို ဥပဒေမဲ့ ဖြတ်ကူး ကျူးကျော် နေလာခဲတဲ. မြန်မာနိုင်ငံသား မဟုတ်တဲ့ ဘင်္ဂါလီတွေ သူတိုရဲ.သားစဉ်မြေးဆက်တွေ ဟာ ရေကြည်ရာ မြက်နု
ရာဖြစ်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ကနေ မပြန်လိုကြဘူး ၊ စစ်ပြေး ဒုက္ခသယ် ပြသနာဟာ မပြေလည်ယုံဒင်မက ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးရယ်လို. သူတို့
ကိုယ်သူတို. နာမည်ပေး ၊ လက်နက်စွဲကိုင် သောင်းကျန်းပြီး
ဒို.ပြည် ဒို.မြေ ဒို.လူမျိုး ဒို.ဘာသာကို အဖက်ဖက် က နည်းအမျိုးမျိုးနဲ. ပြသနာရှာ ရန်လုပ် နေခဲ့ကြတာ မြန်မာတိုင်းရင်းသား အဖြစ် နယ်မြေ
တွေ ရပိုင်ခွင့်ဆိုတာတွေကိုပါ အတင်း အဓမ္မ တောင်းဆိုနေကြတယ် လိုမြင်တယ် ၊၊
ဗုဒ္ဒဘာသာဝင် ရခိုင်တွေ မြန်မာတွေဟာလဲ ဘဂါင်္လီ မွတ်စလင်တွေရဲ. ဒါဏ်ကို ကြိတ်မှိတ်အောင့်အီး သီးခံနေလာခဲ့ကြတာ ၁၈၂၄ ခုက စတဲ့ သမိုင်းတလျှောက်ဘဲ ၊ ဒီနေ. မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒီမိုကရေစီနဲ့ လူ.အခွင့်အရေးတွေ ပြန်ပြီး ထွန်းကားလာပြီ ဖြစ်တဲ့ အတွက် လူမျိုးရော ဘာသာပါ အပါအ၀င် လူ.အခွင့်အရေးဆုံးရှုံးနေခဲ့ရတာကို ဗုဒ္ဒဘာသာ ရခိုင်တွေ မြန်မာတွေဟာ ဆက်ပြီး သီးခံနိုင်စွမ်း မရှိတော့ပုံရတယ် ၊
ရခိုင် ပြည်နယ်က လူဦးရေရဲ. ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းရှိတဲ ရခိုင်နဲ့ ဗမာ ဗုဒ္ဒဘာသာဝင်တွေဟာ မကြာသေးခင်ကအထိ ကျောချ တဲ့ ဒါးပြကို ဒါးပြ မှန်းမသိ ရန်သူကို ရန်သူမှန်း မသိမမှတ်ခဲ့ကြဘူး ၊ ၂၅ရာခိုင်နှုန်းလောက်
ရှိတဲ့မွတ်စလင်နဲ.ခရစ်ယန်တွေရဲ.ဗိုလ်ကျနေတာကို မခံနိုင်တော့လို. ယမ်းပုံမီးကျ ဆိုတာလို ပေါက်ကွဲ ကြပြီ လို.ပြောရမယ် ၊ ယမ်းပုံကြီးလား ယမ်းပုံလေးလား ဆိုတာကိုတော့ ကြည့် ရ အုံးမယ် ၊
အခု ဒေသခံ လူတွေဒင် မဟုတ် ဗုဒဘာသာဘုန်းကြီး သံဃာ ရဟန်း
တွေပါ ပါလာပြီ ၊ မွတ်စလင်အဖွဲ. ဆိုတာကလဲအခွင့် နည်း အမျိုးမျိုးနဲ. ဖက်စုံကနေ အခွင့်ကေါင်းယူပြီးဝင်စွက်တယ် ၊ မြန်မာတွေ ကောင်းစား
ကြတောမယ်ဆိုတာ မြင်လို. ဒီလိုဖြစ်လာအောင် တမင်္ဂလာ ကြိုတင်
ကြံစည်ခဲ့ကြတာဘဲ လား စဉ်းစားစရာ ။ သူတို.လုပ်ရပ်တွေကို သေသေ
ချာချာလေ့လာမယ်ဆိုရင် ဘင်္ဂလီတွေ ဟာ လူမျိုးရေး ဘာသာရေး အရ နယ်ချဲ့လာနေတာ ထင်ရှားနေတယ် ။
ဘဂါင်္လီနိုင်ငံကိုပ်တိုင်နဲ. ၊ ဘင်္ဂါလီ လူမျိုး မွတ်စလင်ဘာသာဝင်တို.ကို မြန်မာတွေ ၀ါလုံးသိမ်း မရမ်းဘူး ၊ ၂ နိုင်ငံ အစိုးရချင်းလဲချစ်ကြည်ကြ
တယ် ၊ စည်းကမ်းရှိကြတယ် ၊ ဒို.အားလုံး ဟာ လူ.စည်း နတ်စည်း တိရိစ္ဆာန် စည်း ဆိုတဲ့ စည်း ၃ စည်း တားပြီး လိုအပ်သလို ထိထိ
ရောက်ရောက် ဆောင်ရွက် သွားဘို.လိုလိမ့်မယ် ဖြစ်တယ် ။ ဒို.မြန်မာ
နိုင်ငံမှာ တိုင်းရင်းသား ဖြစ်စေ ၊ နိုင်ငံသားဖြစ်စေ ၊ ဧည့်နိုင်ငံသား ဆိုတာဘဲဖြစ်စေတို.ကို တချို.နိင်ငံတွေမှာ တိရိစ္ဆာန် တွေကိုသီးသန်.ခြံဝန်းခတ်ပြီး ထားသလို ဘယ်သူ.ကိုမှ မထားဘူး ။
ဒီ ရိုဟင်ဂျာ ပြသနာကြောင့် ဒို.လူမျိုးအားလုံးဟာ အရင်က မကြုံဘူးတဲ့ ညီညွတ်မှူကြီး တခု ရဘို.လိုအပ်နေတယ် ။ လူမျိုးအရ ဘာသာအရ တဦးပေါ်တဦးလေးစားသင့်တယ် ။ လူမျိုးနဲ.ဘာသာကို ဆင်ခြေလုပ် ခုတုံးလုပ် အကြောင်းပြ ချက်တွေနဲ.တရိရိ နယ်ချဲ့လာသူ ဘယ်သူကိုမှ ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ ဒို.တတွေ လိုက်လျှော အရှုံးမပေးအပ်ဘူး ။ အခြေခံဥပဒေ ကလဲ ခွင့်မပြုဘူး ၊
ဒီမှာဒင် နားလိုက် အုံးမယ် ပျော်ပျော်ပါးပါးပေါ့ ။